१२ शक्तिशाली जीवन कोचिंग चरणहरू - आफैंको सर्वश्रेष्ठ संस्करण बन्नुहोस् कुनै फरक पर्दैन - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B12B मार्केटप्लेस समाचार
सम्पादकको पिक जनवरी 21, 2021 जनवरी 20, 2021 रोबर्ट मोमेन्ट ब्लग, व्यापार, सम्पादकको पिक, जीवन शैली
यसको सट्टामा, किन सोच्ने प्रयास गर्नुहोस्।
कृतज्ञताको मनोवृत्तिले जीवनमा तपाईंको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्दछ।
परिवर्तनका लागि अझ खुला बन्नु भनेको तपाईंले गर्न सक्ने जीवन परिवर्तन गर्नेहरू मध्ये एक हो।
यी केहि सोच्ने-बुझ्ने प्रश्नहरू हुन् जुन तपाईंलाई ट्रयाकमा छ वा छैन भन्ने कुराको संकेत दिन सक्छ र तपाईंको उत्तम आत्मसँग संरेखित हुन्छ। हामी सबैले हाम्रो जीवनमा त्यस्तो केही पलहरू लियौं जहाँ सबै योजनाहरू अनुसार योजनाहरूमा थिएनन्, वा हामीले महसुस गर्‍यौं कि हाम्रो जीवन पूरै बन्द छ। राम्रो समाचार यो फिक्सिंग हो। तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ वा के गर्नुभयो तपाईंले केही फरक पार्दैन। तपाईंसँग आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्ने क्षमता छ। त्यसोभए, यदि तपाईं आफैंको उत्कृष्ट संस्करण बन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, पढिरहनुहोस्! निम्न १२ चरणहरूले प्रभावकारी मानसिकता पाली सिर्जना गर्दछ, जुन तपाईंको जीवनलाई उत्तमको लागि बदल्छ।
१. आफैलाई थाहा दिनुहोस् र लगानी गर्नुहोस्
हाम्रो जीवनको कुनै न कुनै बिन्दुमा हामी सबैले "फसेको" महसुस गरेका छौं। यो त्यस्तो पेट भावना हो जसले भन्छ कि केहि ठिक छैन; त्यहाँ जीवनको लागि बढी हुनु पर्छ यो?
जब हामी "अनस्टक" गर्ने प्रयास गर्छौं, हामी प्राय: सोच्दछौं के हामी जीवनमा चाहन्छौं। यसको सट्टामा, को बारे मा सोच्नुहोस् किन। बुझ्दै किन तपाईलाई मार्केटिंग रोजगार चाहिन्छ, किन तपाइँ एक वर्षको X पैसा बनाउन चाहानुहुन्छ, वा किन तपाई सम्बन्ध चाहानुहुन्छ। यसले तपाइँलाई परिप्रेक्ष्यको नयाँ अनुभूति दिन्छ र तपाइँलाई के महत्त्वपूर्ण छ भनेर प्रकट गर्दछ।
जब तपाईं आफ्नो चाहना र आवश्यकताको साथ सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, तपाईं आफैंमा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ अझ बढी चीजहरूको जुन तपाइँको मानहरू र आवेगका साथ पign्क्तिबद्ध गर्दछ र हटाउँदैनन् कि चीजहरू हटाउन। उदाहरण को लागी, यदि तपाईं घर बाहिर जान मन पराउनुहुन्छ किनकि यसले तपाईंलाई शान्त र आराम दिईएको महसुस गर्दछ भने, आफैमा लगानी गर्नुहोस् हरेक दिन बाहिर काममा बाहिर समय खर्च गर्नको लागि।
2। दयालु बन
दयाको शक्तिले मलाई चकित पार्न कहिल्यै रोक्दैन। जब तपाईं दयाको साथ आफ्नो जीवन बिताउनु हुन्छ, तपाईं अवसर र अनुभवहरू छक्क पर्नुहुनेछ जुन तपाईंको मार्गमा आउँदछ।
दयाले ढोका खोल्यो, शाब्दिक र प्रतीकात्मक रूपमा। साधारण इशारा, जस्तै कसैको लागि ढोका खुला राखेर, व्यक्तिको दिन परिवर्तन गर्न सक्दछ। तर के अधिकांश व्यक्तिले महसुस गर्दैनन् कि त्यसले तपाईंको दिन परिवर्तन गर्न सक्दछ। जब तपाईं बढि समुदाय-केन्द्रित हुन र आफ्नो जीवनलाई दयाको साथ सञ्चालन गर्नुहुन्छ, यो त्यस्तो बानी बन्ने छ जुन तपाईं र तपाईंको जीवनलाई साँच्चिकै परिवर्तन गर्न सक्दछ। आफैलाई दयालु हुनु हो बस अरूलाई दयालु हुनु जत्तिकै महत्त्वपूर्ण। आफैलाई दयालु व्यवहार गर्नुहोस्, जस्तो कि तपाईंले अरू कसैलाई पनि गर्नुभयो।
यी १२ चरणहरूले तपाईंलाई तपाईंको उद्देश्यको साथ पign्क्तिबद्ध गर्न र एक मानसिकता शिफ्ट सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ जसले तपाईंलाई आफैंको सर्वश्रेष्ठ संस्करण बन्न अनुमति दिन्छ।
Grat. कृतज्ञता को मनोवृत्ति
कृतज्ञताको मनोवृत्तिले जीवनमा तपाईंको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्दछ। जब तपाइँ आफ्नो जीवनमा प्रत्येक उपहारलाई चिन्नुहुन्छ र यसको कदर गर्नुहुन्छ, चीजहरू परिवर्तन हुन थाल्छन्। तपाईं यी उपहारहरू अधिक र अधिक देख्नुहुनेछ, र तपाईं पाउनुहुनेछ धेरै को लागी कृतज्ञ हुन। उदाहरण को लागी, यदि तपाईंसँग इन्टरनेट पहुँच छ कि तपाईंलाई यो पोष्ट पढ्न सक्षम बनाउँदछ, तपाईंको टाउको माथि आश्रय, र तपाईंको पेटमा खाना - तपाईंसँग धेरै को लागी कृतज्ञ हुन! मानवको रूपमा, हामी नकरात्मकमा बढी ध्यान दिन र सकारात्मकमा कम। भाग्यवस, तपाइँ अभ्यासको एक बिटको साथ तपाइँको मस्तिष्क पुनः प्रोग्राम गर्न सक्नुहुन्छ, र तपाइँको परिप्रेक्ष्य बदल्न सुरू गर्नुहोस्। प्रत्येक रात सुत्नु अघि, तीन चीजहरू लेख्नुहोस् जुन तपाईंप्रति कृतज्ञ हुनुहुन्छ। तपाईको दिन सुरू गर्नु अघि बिहान यसलाई समीक्षा गर्नुहोस् र तपाईको मानसिकतालाई कृतज्ञताको दृष्टिकोणमा बदल्नुहोस्।
Change. परिवर्तन गर्नका लागि खुला हुनुहोस्
परिवर्तन धेरै व्यक्तिको लागि गाह्रो हुन्छ, त्यसैले यदि तपाईं यसबाट टाढा सर्नुभयो भने नराम्रो नमान्नुहोस्। परिवर्तनका लागि अझ खुला बन्नु भनेको तपाईंले गर्न सक्ने जीवन परिवर्तन गर्नेहरू मध्ये एक हो। जीवनमा प्राप्त गर्न लायक केहि पनि अक्सर कामको एक बिट र परिवर्तनको धेरै संग आउँछ। चाहे नयाँ शहर खोज्न शहरहरू परिवर्तन भैरहेको होस्, तपाई आफ्नो पार्टनरसँग कुराकानी गर्ने तरिका बदल्नुहोस्, वा आफैले कुरा गर्ने तरिका बदल्नुहोस् - गम्भीर यो। तपाइँको जीवन कसरी राम्रोको लागि परिवर्तन भएकोमा तपाईं छक्क पर्नुहुनेछ। नियमित रूपमा सानो परिवर्तन गरेर सुरू गर्नुहोस्। तपाईं परिवर्तनको साथ अधिक र अधिक सहज हुँदै जानुहुन्छ तपाईंले यसको अधिक अभ्यास गर्नुहुनेछ, र अन्तमा, तपाईं साहसी र नयाँ चुनौतिहरूको आत्मविश्वासका साथ सामना गर्न तयार महसुस गर्नुहुनेछ!
Learn. सिक्न र बुझ्न सुन्नुहोस्
के तपाईंले कहिल्यै कसैसँग कुराकानी गर्नुभएको छ, जहाँ तपाईं उनीहरू सुन्नुहुन्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ प्रतिक्रिया दिनुहोस्, र बुझ्नु हुँदैन? यदि तपाईं मुद्दाको बारेमा आफ्नो मनको कुरा पोख्दै हुनुहुन्छ भने, यो यति निराश हुन सक्छ कि यदि तपाईले पाउनु भएको प्रतिक्रियाले उनिहरुलाई के भयो भन्ने कुराको व्यक्तिगत उपाख्यान छ वा उनीहरुको घटनाहरूको संस्करण।
अर्को पटक जब तपाईं कसैसँग मुद्दाको बारेमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ, चाहे यो मित्र, सहकर्मी वा परिवारको सदस्य हो, कुराकानीका लागि सीख्ने र बुझ्ने लक्ष्यको साथ। सक्रिय रूपमा सुन्नुहोस्, प्रश्नहरू सोध्नुहोस्, र समय निकाल्नुहोस् तिनीहरूलाई सुन्न। तपाईं द्वन्द्व र चुनौतीहरूको कसरी जवाफ दिनुहुन्छ भन्नेमा तपाईंको अविश्वसनीय बदलाव देख्नुहुनेछ जबकि तपाईंको जीवनमा सम्बन्धहरू सुदृढ पार्दै।
Others. अरूलाई मद्दत गर्नुहोस्
हाम्रो जीवनको कुनै समय, हामी गर्नेछौं सबै अरूको मद्दत चाहिन्छ। अन्य बिन्दुहरूमा, हामी मद्दत गर्ने स्थितिमा छौं। अरूलाई मद्दत गर्दा तपाईंको जीवनलाई थुप्रै तरिकामा सुधार गर्न सक्दछ। यसले तपाइँलाई नयाँ परिप्रेक्ष्य र उत्तम दृष्टिकोण प्रदान गर्न सक्दछ, यसले तपाइँको समर्थन नेटवर्क निर्माण गर्दछ, र तपाइँले फरक पार्ने कुरा थाहा पाउँदा राम्रो महसुस गर्नुहुनेछ। त्यहाँ असंख्य तरिकाहरू छन् जुन तपाईं अरूलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं सूपको भान्छामा स्वयम्सेवा गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईंको साथीको लागि तातो खाना पकाउन सक्नुहुनेछ जो कठिन समयबाट गुज्रिरहेको छ, वा तपाईंको वृद्ध छिमेकी लनलाई कुलो पार्नुहोस्। सहयोगी हात उधारो दिन धेरै समय वा पैसा लिन आवश्यक पर्दैन। सबैभन्दा साधारण इशाराहरू खाँचोमा परेका व्यक्तिको लागि भिन्नताको संसार बनाउन सक्छ। एक मित्रलाई "तपाइँको सोच" पठाउँदै वा एक जाडो कपडा कोषमा $ १० दान गर्नाले तपाईंको मुडलाई सुधार गर्न सक्दछ, जबकि कसैको दिनको लागि राम्रोको लागि।
Fear. डर र नकारात्मक आत्म-कुरा हटाउनुहोस्
यसको बारेमा सोच्नुहोस्: यदि तपाईं असफल हुन सक्नुहुन्न भनेर थाहा पाउनुभयो भने के गर्नुहुन्छ? के तपाईं आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्नुहुन्छ वा पूरै फरक क्यारियर मार्ग अनुसरण गर्नुहुन्छ? असफलताको डरले हामी मध्ये धेरैलाई हाम्रो सपना र आकांक्षा पछ्याउन रोक्दछ। यस तरिकाले सोच्नुहोस्, डर भनेको झूटा प्रमाणहरू वास्तविक देखिन्छ।
हाम्रो डर अक्सर नकारात्मक आत्म-कुरा मा जरा हुन्छन् र तथ्यमा आधारित छैनन्। कति पटक आफैलाई भन्छन् कि यो गर्न सक्नुहुन्न, तपाईं पर्याप्त हुनुहुन्न, तपाईं एकदम चतुर हुनुहुन्न, तपाईंसँग पर्याप्त पैसा वा पर्याप्त जडानहरू छैन ... यो नकारात्मक आत्म-कुरा चलिरहन्छ र काम गर्न सक्दिन you!
तपाइँ आफैंलाई के माया गर्नुहुन्छ भनेर केन्द्रित गर्न प्रतिबद्ध गर्नुहोस्। तपाई कस्तो महान हुनुहुन्छ? के तपाइँ अरू भन्दा अलग सेट गर्दछ? कुन कुराले तपाईंलाई अद्वितीय बनाउँछ? तपाईंको नकारात्मक आत्म-कुराको प्रति सजग रहनाले तपाईंलाई आत्मविश्वास दिन सक्छ कि तपाईंले आफ्नो सपनाहरू पछाडि पछाडि पड्नु आवश्यक छ।
Daily. दैनिक मानसिक र शारीरिक स्वस्थ बानी अभ्यास गर्नुहोस्
तपाईंको दैनिक दिनचर्यामा स्वस्थ बानीहरू समावेशी गर्न सुरू गर्नुहोस्। सानो सुरु गर्नु उत्तम हुन्छ ताकि तपाईं आफ्ना नयाँ दिनचर्याहरूसँग अनुरूप रहनुहुनेछ। उदाहरण को लागी, तपाई एक लक्ष्य को लागी १ day मिनेट पैदल को साथ प्रत्येक दिन शुरू गर्न सक्नुहुनेछ। यो एक प्रबन्धन योग्य लक्ष्य हो जुन तपाईं कुनै पनि प्रमुख जीवन परिवर्तनहरू बिना समावेश गर्न सक्नुहुनेछ। १ minutes मिनेट जति धेरै आवाज नहुन सक्छ, तर एकचोटि तपाईंले सुरु गरे पछि तपाईंलाई यसको रमाइलो लाग्न सक्छ, र १ 15 मिनेट पैदल !० मिनेटमा परिवर्तन गर्न सक्दछ!
तपाईं पनि बिहान मध्यस्थता, प्रार्थना, वा जर्नलिंग गतिविधि तपाईंको बिहानको तालिकामा समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। यी अभ्यासहरूले दिनको लागि टोन सेट गर्न र तपाईंलाई सही मानसिकतामा ल्याउन मद्दत गर्दछ। तपाईको मन र शरीरलाई स्वस्थ बानीको साथ बलियो बनाउन त्यहाँ असंख्य विकल्पहरू छन्। सुरुमा, तपाईंले यी चीजहरू गर्न सचेत प्रयास गर्नुपर्नेछ, तर एक महिना भित्र, तिनीहरू तपाईंको बानीमा दिनचर्याको बानी र प्रिय भाग हुनेछन्।
तपाईं पर्याप्त हुनुहुन्छ! तपाईं अहिले पर्याप्त हुनुहुन्छ, यसै क्षणमा।
Your। तपाईको शक्तिको स्वामित्व पाउनुहोस्
तपाईं पर्याप्त हुनुहुन्छ! तपाईं अहिले पर्याप्त हुनुहुन्छ, यसै क्षणमा। तपाईं सक्षम हुनुहुन्छ धेरै, र तपाईंसँग आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्ने शक्ति छ! पुष्टिकरण दोहोर्याउनुहोस् "म पर्याप्त छु"ऐनामा हेर्दा। तपाईंको आँखामा सीधा हेर्नुहोस् र कम्तिमा5पटक यो भन्नुहोस्। यो दिनहुँ गर्नुहोस्, प्रत्येक बिहान तपाईंको दिन सुरु गर्नु अघि। तपाईंको शक्ति स्वामित्वको अर्थ तपाईंको जीवनलाई यस अनुभूतिको साथ बाँच्नु हो कि तपाईं आफ्नो जीवनमा अविश्वसनीय चीजहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो तपाईं हो आफ्नै तपाइँका निर्णयहरू, तपाइँका छनौटहरू, र तपाइँ सजगतापूर्वक तपाइँको उत्तम संस्करण सिर्जना गर्नुहुन्छ, जे भए पनि।
१०. तपाईको आराम क्षेत्रबाट बाहिर निस्कनुहोस्
आफैंको उत्तम संस्करण बन्नको लागि तपाईले आफ्नो कम्फर्ट क्षेत्रबाट बाहिर जानुपर्नेछ! मानौं तपाईं एक मायालु रोमान्टिक सम्बन्ध चाहनुहुन्छ। तपाईंले कसैलाई चर्च, तपाईंको स्वयम्सेवक समूह र साथीहरू मार्फत भेट्ने प्रयास गर्नुभयो, तर त्यसले काम गरेन। तपाईंको आराम क्षेत्रबाट बाहिर कस्ने प्रयास गर्नुहोस् र क्लबमा सामेल हुनुहोस् वा भर्चुअल नेटवर्कि event कार्यक्रममा भाग लिनुहोस्। COVID-19 को साथ, बाहिर जान र नयाँ मानिसहरूलाई भेट्न चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। अनलाइन डेटि plat प्लेटफर्महरू तपाईको सुविधा क्षेत्रबाट बाहिर हुन सक्छ, तर तिनीहरूले तपाईंलाई नयाँ व्यक्तिहरूसँग च्याट गर्न र पाठ सन्देशहरू, फोन कलहरू र भिडियो च्याट मार्फत कसैलाई चिन्न अनुमति दिनेछन्। जब हामी केहि नयाँ प्रयास गर्दछौं र बिभिन्न अनुभवहरूको लागि खुला छ, हामी जीवनले दिन सक्ने सबै कुराको मज्जा लिन सक्छौं। तपाईलाई कहिले थाहा छैन तपाई कसलाई भेट्नुहुनेछ र किन। त्यहाँ बाहिर निस्किनुहोस् र तपाईंको आराम क्षेत्र पछाडि छोड्नुहोस्।
११. क्षमाको शक्तिलाई अँगाल्नुहोस्
त्यहाँ एउटा भनाइ छ जुन यसो भन्छ, "क्षमाले तपाईंको विगतलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन, तर यसले तपाईंको भविष्यलाई परिवर्तन गर्न सक्छ।" आफैलाई र अरूलाई क्षमा गर्नाले तपाईलाई रिस, आक्रोश, र पश्चातापको बोझबाट स्वतन्त्र गरेर अधिक मानसिक र भावनात्मक ठाउँ सिर्जना गर्दछ। क्षमाले तपाईंको सम्बन्धहरूलाई सुधार गर्न, चिन्ता कम गर्न, तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ पार्न, आत्म-सम्मान बढाउन, र अधिक गर्न सक्दछ।
१२. वर्तमानमा बाँच्नुहोस्
धेरै व्यक्ति विगतमा बाँच्नको लागि पर्याप्त समय खर्च गर्दछन्, राम्रो दिनहरू सम्झँदै वा पश्चाताप गर्दै। वैकल्पिक रूपमा, धेरै मानिसहरूले भविष्यको सपना देखाउँछन्, "मेरो जीवन कहिले राम्रो हुन्छ" भनेर सोच्दै ... वा "म कहिले खुशी हुनेछु" भन्ने कुरामा। जीवनको वास्तविक जादू वर्तमान क्षणमा हुन्छ। वर्तमानमा जिउँदा तपाईंको मानसिक र शारीरिक कल्याणको लागि धेरै फाइदाहरू छन्। ध्यान दिमागलाई अभ्यास गर्ने एक उत्तम तरिका हो, र तपाईंको सचेत जागरूकतालाई वर्तमान क्षणमा फिर्ता ल्याउने। अर्को पटक जब तपाईं खाना खान बस्नुहुन्छ, त्यस दिनको शुरूमा काममा के भयो वा तपाईंको माउन्ट गर्ने सूचीको बारेमा सोच्नुहोस्। यसको सट्टामा, तपाइँको खाना, स्वाद, गन्ध, रंग, र तपाइँको मुख मा बनावट मा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। तपाईं पूर्ण नयाँ परिप्रेक्ष्यको साथ जीवनको आनन्द लिन सुरु गर्नुहुनेछ।
यी १२ चरणहरूले तपाईंलाई तपाईंको उद्देश्यको साथ पign्क्तिबद्ध गर्न र एक मानसिकता शिफ्ट सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ जसले तपाईंलाई आफैंको सर्वश्रेष्ठ संस्करण बन्न अनुमति दिन्छ। एक अर्थमा, ती कुहिराहरू हट्नेछन् जसले तपाईंको दृष्टिलाई बादल दिन्छ र तपाईंको सम्भाव्यतामा पुग्न रोक्दछ। जब तपाईं आफ्नो जीवनलाई उत्तम उत्तम जीवन दिनुहुन्छ, तपाईं अरूलाई पनि त्यस्तै गर्न प्रेरित गर्नुहुनेछ।
तपाईको सर्वश्रेष्ठ संस्करण हुनुहोस् सांप्रदायिक समाचार जीवन कोच जीवन कोचिंग महिला को लागी जीवन कोचिंग जीवनशैली आफूलाई पुन: सार्नुहोस् आत्मविश्वास आत्माबल स्वयं सहायता आत्म प्रेम महिला